Sniper Ops 3D Kill Terror Shooter, Mac အတွက်ဂိမ်းအသစ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
Sniper Ops 3D Kill Terror Shooter, Mac အတွက်ဂိမ်းအသစ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းသောဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်စနိုက်ပါဖိနပ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဂိမ်းဟာငါတို့ရဲ့သူဌေးကကျွန်တော်တို့ကိုအဆိုပြုထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတာပါ၊ မစ်ရှင်တွေကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာတစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းရှုပ်ထွေးလာတယ်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်အလွန်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားရည်ရွယ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Mac ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကောင်းကောင်းရနိုင်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း ဂိမ်းထဲမှာအခမဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်း ၀ ယ်ယူနိုင်ပါတယ် လက်နက်များနှင့်တူသော။
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ screen ပေါ်မှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်သောဂရပ်ဖစ်အဆင့်ကို configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်အရအလွန်အစွမ်းထက်သောဂိမ်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပေးရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သည်၎င်း၏အရည်အသွေးများကိုအမြင့်ဆုံးအထိဖော်ပြနိုင်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်တောင်းဆိုသောဂိမ်းမဟုတ်ပါ OS X 10.8 နှင့်အထက်ရှိသည့်မည်သည့် Mac မဆိုဤ Sniper Ops 3D အတွက်သင့်လျော်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဂိမ်း၏အခက်အခဲမှာတိုးများလာပြီးအစတွင်မရှုပ်ထွေးသော်လည်း၎င်းသည်မစ်ရှင်များဖြတ်သန်းခြင်းနှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်များအရပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်။ ၎င်းကိုကစားရန် trackpad (သို့) မောက်စ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤကိစ္စတွင် mouse ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ဘယ်ဘက်ခလုတ်ဖြင့်ရိုက်။ ညာနှင့်ချဲ့ပါ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိရင်ခလုတ်နှိပ်ရုံပဲရတယ်.
ဒီဂိမ်းကအသက် ၁၇ နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်မသင့်တော်ဘူး။ ဂိမ်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကငါတို့ကစနိုက်ပါသမားလို့ထင်ဖို့သူတို့အတွက်ကစားစရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာကငါတို့မှာစနိုက်ပါသမားဖြစ်တယ်။ Mac App Store တွင်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Sniper Ops 3D Kill Terror Shooter, Mac အတွက်ဂိမ်းအသစ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Juan Carlos လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
သင့်တွင် track pad ရှိပါကသင်သည်ဤဂိမ်းကိုမကစားနိူင်ပါ။ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းမှဖယ်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။ သင့်တွင်ပုံမှန်မောက်စ်မရှိပါက track တစ်ခုဖြင့်ဤဂိမ်းကိုကစားရန်မေ့သွားသည်။ ရိုင်ဖယ်ရဲ့အမြင်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့၊ ငါသော့တွေအားလုံးကိုစမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ ရထားရဲ့မျက်လုံးကို track pad နဲ့မဖယ်ရှားနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာပုံမှန်မောက်စ် (သို့) ဒီကြီးစွာသောဂိမ်းမှာကစားဖို့မေ့နိုင်မလား။ ။ ငါ Sniper Ops 3D kill terror ကိုရည်ညွှန်းသည်
Juan Carlos Lópezအားပြန်ပြောပါ
သင်၏ MacBook ကို PKparis USB 3.0 K'1 drive သို့အရန်ကူးပါ
watchOS3ရှိ Breathe အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသော Apple Watch အတွက်နံရံကပ်အလှဆင်များ